Izindlela eziyi-6 lapho Izimpawu Zomphakathi Zithuthukisa Izinga | Martech Zone
Izindlela ze-6 lapho Izimpawu Zomphakathi Zithuthukisa Izinga
NgoMsombuluko, Disemba 17, 2018 NgoLwesithathu, uDisemba 19, 2018 UChloe Smith
Izimpawu zomphakathi zimelela ukuhlangana, okufana nokuphindaphindwa, ukuthanda, kanye namavoti wabasebenzisi bezokuxhumana nomkhiqizo wakho, okukhombisa ukuthandwa kwawo nekhwalithi yezinjini zokusesha. I-Google, i-Bing, i-Yahoo, nezinye izinjini zokusesha zisebenzisa ama-algorithms athile ukuthola isilinganiso semiphumela yosesho. Ithonya langempela lezimpawu zenhlalo kumiphumela yama-algorithms ukuqagela kwanoma ngubani, ngoba ubuchule bezinjini zokusesha buvikelwe ngezivumelwano ezingadaluli. Kodwa-ke, imithombo yezokuxhumana ngokungangabazeki iyindlela ephumelela kunazo zonke yokwazisa okuqukethwe ku-intanethi, noma ngabe okuthunyelwe yibhulogi, izincwadi, amavidiyo, izinsiza, noma okunye okuqukethwe, kunenketho yezethameli zakho noma abathengi yokulinganisa izinsizakalo noma ukwaba okuqukethwe nabo abangane babo, ngokusebenzisa izinkinobho zokwabelana. Ngezansi kunezindlela ezithile lapho izimpawu zomphakathi zithuthukisa izinga:
Inani Labalandeli Bemidiya Yezenhlalo
Inani labantu abalandela umkhiqizo wakho ezinkundleni zokuxhumana likhombisa ukufaneleka kwakho ezinjini zokusesha. Uma unenani elikhulu labalandeli, izinjini zokusesha zizokukwazi lokho futhi zizosithinta kahle isikhundla sakho emiphumeleni yosesho. Enye into enikelayo ehlobene nemithombo yezokuxhumana inani lamasheya noma lokuphinda usebenzise umkhiqizo wakho, njengoba inani elikhulu lamasheya likhulisa ithrafikhi yokudlulisela kusayithi lakho.
Izinjini zokusesha nazo ziyabona futhi zinake inombolo kanye ikhwalithi yama-backlinks lapho usekelwa imiphumela yosesho. Ama-backlink ayizixhumanisi kwamanye amawebhusayithi aholela ekhasini lakho. Uma lawo mawebhusayithi ethembekile futhi efanelekile, ingcono ikhwalithi yama-backlinks akho.
Izibuyekezo zikhombisa ukwaneliseka kwamakhasimende akho ngezinsizakalo noma izimpahla ozihlinzekayo, futhi ngenxa yalokho, zifanele amabhizinisi ahlukahlukene. Ngakho-ke, uma ungumnikazi webhizinisi, kufanele ufake uhlelo lokubuyekeza ekhasini lakho lewebhu, ngoba ukubuyekezwa okuhle kuzonikela ekhasini lakho ukuthi libekwe kangcono ngezinjini zokusesha. Kufanele futhi ucabangele amawebhusayithi agxile ekunikezeni imininingwane kuzibuyekezo zamakhasimende, ngoba ukubuyekezwa okuhle kumasayithi avelele kuzokhuphula nezinga lakho.
Ungazikhulisa Kanjani Izimpawu Zakho Zomphakathi?
Uma ufuna ukuthuthukisa amazinga osesho lwakho ngokwandisa izimpawu zomphakathi, mhlawumbe kufanele ucabangele ukuqasha enye yama-ejensi amaningi ahlinzeka ngezinsizakalo zawo ku-inthanethi, njenge Amaklayenti ayisishiyagalombili ukwakha umkhankaso wenhlalo wakho. Ikhwalithi ephezulu nokuqukethwe okujabulisayo kubalulekile ekusebenzisaneni okuhle. Uma okuqukethwe kulungile, kufanele futhi uqinisekise ukuthi ithola indawo yayo kokuphakelayo kwezindaba zokuxhumana, ngokuthumela njalo, noma ngokunikeza izikhuthazo zokwabelana ngokuqukethwe kwakho, njengokunikezwa ngezikhathi ezithile. Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi amasayithi wezokuxhumana ahlukahlukene angadinga ukuthi ukhiqize izinhlobo ezahlukahlukene zokuqukethwe ukuze ubekhona kuzo zonke.
Amanani we-Bounce Low
Uma abantu abavakashela ikhasi lakho lewebhu futhi bechitha isikhathi esithile bekuphequlula noma befunda okuqukethwe, kusho ukuthi okuqukethwe okunikezayo kufanelekile. Ngakolunye uhlangothi, abantu babuyela ngokushesha emiphumeleni yabo yosesho ngemuva kokuchofoza ekhasini lakho kukhombisa okuhlukile. Lower bounce rates nesikhathi esichithwe upheqa okuqukethwe kwakho kwewebhu kuzokusiza ukuthi ukleliswe kangcono kunabancintisana nabo.
Imiphumela eyenziwe yaba ngeyakho
Lapho abantu belinganisela, bebuyekeza, noma bathanda ibhizinisi lakho noma izinsiza eziku-inthanethi, kungenzeka ukuthi ikhasi lakho lewebhu lizovela njengokuphakanyiswa kubangani balowo muntu ngoba amasayithi amaningi ezokuxhumana asebenzisa imiphumela eyenziwe ngezifiso ukukhombisa abasebenzisi okuqukethwe lapho abangane babo unesithakazelo. Ngokwenza okuqukethwe kwakho kukhange futhi kuhlanganyele ungasebenzisa lo mphumela we-cascade ukuthuthukisa ukutholakala komkhiqizo wakho ku-inthanethi.
Ukuba khona okukhulu kwe-inthanethi komkhiqizo wakho kuholela kubantu abaningi ukuwufuna ezinjini zokusesha. Imibuzo yosesho ejwayelekile efaka negama lomkhiqizo wakho izonikela ekutheni itholakale ifanelekile futhi inokwethenjelwa, okuholela ekutheni injini yokusesha iklelise ikhasi lakho lewebhu kangcono kakhulu emiphumeleni yokucinga yokuqukethwe okufana nalokho okunikezayo, noma ngabe umkhiqizo wakho akufakiwe embuzweni wosesho. Isibonelo, uma inkampani yakho isebenza ngezinsimbi zomculo, ukusesha okuningi okufana ne- “/ your shop name / guitars” kuzokusiza ukuthi ube sezingeni elingcono lapho abantu besesha “online guitar shop”.
Yize ingekho impendulo eqondile embuzweni wokuthi ngayiphi indlela futhi kangakanani izimpawu zomphakathi ezithinta ukubekwa kwekhasi lakho lewebhu emiphumeleni yosesho, ukuhlangana okungaqondile phakathi kokuthandwa kwimidiya yezenhlalo nasezingeni kusobala impela. Lesi yisizathu esenza ukuthi izinkampani zibeke imizamo emikhulu ekuhleleni nasekusebenziseni ukumaketha kwezokuxhumana. Ngemuva kwakho konke, noma ngabe izimpawu zomphakathi bezingakhuphulisi izinga lakho, imithombo yezokuxhumana isazoba enye yezindlela ezinhle kakhulu zokwenza inkampani yakho itholakale futhi itholakale kalula online, kanye nokukhuthaza okuqukethwe kwakho kubabukeli bomhlaba abakhulayo.
Tags: Izibuyekezosocial media
UChloe Smith ungumxhumanisi webhizinisi futhi umbhali wesikhathi esithile uzimisele ukuhlanganyela ngezeluleko. Ukholelwa ukuthi uthando, isibindi futhi, ngaphezu kwakho konke, ulwazi luzala impumelelo. Lapho engasebenzi, mhlawumbe kwenye indawo ugajwe yincwadi enhle, nenkomishi yetiye lemongrass (noma ngokwedlulele ukuzitika ngokweqile ngokubuka uhlelo olusha sha lweNetflix).
I-Playoff: Faka isendlalelo se-Gamification kunoma yiluphi uhlelo
Izinhlelo Zokusebenza Ezintathu Odinga Ukuziqhuba Ngebhizinisi Lakho Le-ecommerce Ngokufanelekile